Shiinaha soosaarayaasha qorsheeyaha iyo iibiyeyaasha | Mashiinka Dongheng
Noocyada qorsheeyaha jiridayada
KINGER qorsheeyaha jirida waxay leedahay 2 nooc oo ka saari kara 300mm ama 400mm xidid geedka
Naqshadeynta Dharka Gaarka ah
Kinger qorsheeyaha jirridda la double helix daab daab, daab bir adag iyo madax wax gaar ah goynta ayaa si fiican u waxqabadka ka saarida jirridda xididka.
Qalab la Codsaday
KINGER qorsheeyaha jirridda waxaa lagu dhejin karaa qayb kasta oo ka mid ah dhulka auger Drive auger si ay uga dhigaan ka saarista xididka si fudud oo dhakhso leh.
KINGER Stump Planer waa lifaaq wax ku ool ah oo bixinaya hawl dheeri ah adoo ku daraya awooda aad ugu rogi karto ku darsigaaga dhulbahaaga ah gebi ahaanba jir ka saarid Adiga oo ku darista qorshahan jirida ee ku lifaaqan meelaha aad ku lifaaqan tahay, waxaad si badbaado leh uga saari kartaa jirridda geedaha hoos udhac la'aan jahwareer, buuq iyo khatar.
Faahfaahinta kor ku xusan waa tilmaamahayaga qorshaynta jirida ee tixraacaaga.Waxaa lagu dhejin karaa qayb kasta oo ka mid ah auger drive si ay u shaqeeyaan.
Hore: Kala qaybi
Xiga: Baaldi fiicni